काठमाडौँका साँघुरा गल्ली र पैदलयात्री ! – dudhkoshionline
काठमाडौँका साँघुरा गल्ली र पैदलयात्री !
गार्डेन राई/ काठमाडौं । काठमाडौँमा पैदल हिँड्का लागि साना अनि साँघुरा गल्लीहरू छन् । अनि ती साना गल्लीमा आवतजावत गर्ने पैदलयात्रीहरू असङ्ख्य छन् । हिँड्दाहिँड्दै कतिबेला कोसँग ठेस लाग्छ पत्तो नै पाइन्नँ ।
व्यस्त सडकको वल्लोपल्लो साइडमा ठूल्ठूला बिल्डिङ । बीचमा कतै पिच गरिएका चिल्लो सडक त कतै कच्ची । पिच गरिएका र कच्ची सडकमा आवतजावत गर्ने सवारीसाधन पति उत्तिकै लर्को लागेर कुदिरहेका हुन्छन् । मानौँ, उनीहरू रेसमा भाग लिएका खेलाडी हुन् र आफना प्रतिद्वन्दीलाई हराएर आफू विजयी हुन्छु भन्ने मनसायका साथ जोड जोडले दौडिरहेका छन् । अनि एकले अर्कालाई पिछा गर्दै लखेटिरहेको जस्तो पनि लाग्ने ।
काठमाडौँमा गाडी गुड्ने सडक मात्र कहाँ व्यस्त हुन्छन् र ! साँघुरा अनि साना गल्लीहरू पनि उत्तिकै व्यस्त अनि खचाखच हुन्छन् । बिहान करिब ४ बजेदेखि ७ बजेसम्म मर्निङ वाकमा निस्किने भिड सकिएपश्चात स्कुल, कलेज, अफिस, सपिङ लगायत अन्य विविध कामका लागि आवतजावत गर्ने मानिसहरूले गर्दा बिहान ८-९ बजेदेखि बेलुकी ८ बजेसम्म साँघुरा गल्लीहरू व्यस्त रहन्छन् ।
कतिपय पैदलयात्रीहरू उत्तिकै हतारोमा दौडिरहेका हुन्छन् । मानौँ, उनीहरू काठमाडौँदेखि हिँडेरै कुनै अर्को सहरतर्फ आजै पुग्नुछ । अगाडिबाट आइरहेका अर्को यात्रुलाई समेत देख्दैनन् । लाग्छ- दुवैजना उस्तै गतिमा हिँडेको भए बीचमा ठ्यांग ठोक्किन्छन् । अनि सडकमा दुईतर्फबाट गाडी ठोक्किएर यता र उता बजारिए जस्तै बजारिन्छन् ।
अब त्यही गल्लीमा अर्का थरिका यात्रु देखिन्छन् । जसले ती साँघुरा गल्ली पूरै ओगटेर हिँडिरहेका हुन्छन् । लाग्छ- त्यो बाटोमा अरु कोही हिँड्नै हुन्न । गल्ली साना छन् भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि २-४ जनाको समूह काँधमा काँध मिलाएर हिँडिरहेका हुन्छन् । आ-आफ्नो गफमा रमाउँदै ठूलो हाँसोले भरिन्छ बाटो । कोही कानमा हेडफोन, हातमा मोबाइल लिएर गीत सुन्दै हिँडिरहन्छन् । कोही फोनमा कुरा गरे पनि सँगै बसेर कुराकानी गरेजस्तै हात फिँजाएर गफ गर्दै । अनि कोही बाटो काट्दा कुम अनि कुहिना ठोक्काउँदै हिँड्छन् । बाटो छोड्नु त कुरै छोडौँ झुक्किएर ठोक्किँदा समेत सरी भन्न भ्याउँदैनन् ।
कतिपय परैबाट अलि साइड लाग्दै हिँड्छन् । कसैले बाटोमा भगवानको सानो मूर्ति देखेपछि हात शिरमा पुर्‍याउँछन् । कतिपय छेवैमा बाइक साइड लगाएर त्यही गल्लीमा खुट्टा परसम्म तेर्स्याएर आफ्नै सुरमा बसिरहेका हुन्छन् । कोही त्यही गल्लीको बीचमा ठिङ्ग उभिएर मस्त गफ गर्नमा व्यस्त हुन्छन्, त्यही बाटो हिँड्दै आएकाहरूलाई बाटो छाड्न फुर्सद हुँदैन उनीहरूसँग ।
गल्लीलाई घरको फराकिलो आँगन सम्झेर घाम ताप्दै मिठो निन्द्रामा हुन्छन्- काेही । घामपानीबाट जोगिनका लागि छाता ओडेर हिँड्नेलाई अर्को पैदलयात्रीको वास्ता हुन्न । छाताले लागोस् कि बाटो छेकियाेस् ।
कोही डमीमा सजाएर राखिएका कपडाहरू हेर्दै हेर्दै बाटो काट्छन । चाबहिल, पुतलीसडक, बागबजार लगायतका मुख्य चाेकका गल्लीहरूबाट अग्ला अनि ठूला बिल्डिङमा आकर्षक तरिकाले डिजाइन गरी झुन्ड्याइएका होर्डिङ बोर्डतिर हेरिरहेका हुन्छन्- कतिपय चाहिँ । कतिपय त्यही गल्लीको छेवैमा बसेर पम्प्लेटहरू बाँड्नमा व्यस्त देखिन्छन् । त्यस्तो व्यस्त गल्लीमा पनि सेल्फी लिन अनि फोटो खिचाउन भ्याइसकेका हुन्छन् ।
अनि त्यही गल्लीमा मकै व्यापारी, तरकारी, चटपटे अनि पानीपुरी, फलफूल व्यापारी अनि अन्य साना व्यापारीहरू समेत अटिरहेका छन् । कतियपले त्यही साँघुरो गल्लीमा नै बाइक र स्कुटर पार्किङ गर्न राखेका हुन्छन् ।
पानीपुरी र चटपटे खान झुम्मिरहेका ग्राहकलाई वास्ता नै हुन्न अन्य पैदलयात्रुको । उनीहरू त्यही गल्लीमा गफिँदै आफ्नै धुनमा हाँस्दै खानमा व्यस्त हुन्छन् । त्यही गल्लीको छेवैमा फोहोरका डंगुर थुपारिएका छन् । एक कोश टाढासम्म गन्हाउने फोहोरको केही वास्तै नगरी जुत्ताचप्पल सिलाइरहेका हुन्छन् साना व्यवसायीहरू । मानौँ त्यहाँ कुनै महँगो ब्रान्डकाे पर्फ्युमको मीठो सुगन्ध आइरहेको छ ।
काठमाडौँका गल्लीहरू प्रायः व्यस्त नै देखिन्छन् । गल्लीमा हिँड्ने पैदलयात्रीहरू एकलाई अर्काको वास्ता छैन । मुस्किलले भिड छिचोल्दै अर्को भिड छिचोल्न हतार देखिन्छन् । गल्लीहरू साना अनि साँघुरो भए पनि त्यही गल्ली धेरैको सहारा बनिदिएको छ । धेरैलाई जीविकोपार्जन गर्नलाई सघाउ समेत पुगिरहेको छ ।
Tags: काठमाडौँगल्ली र पैदलयात्री
एकता खारेज गर्ने फैसलाविरूद्ध सर्वोच्च पुगे प्रचण्ड
२४ घण्टामा एक सय ६७ मा कोरोनाकाे सङ्क्रमण पुष्टि